Etu aga - esi zọpụta Mgbasa Ozi Mgbasa Njikọ Njikọ | Martech Zone
Algọridim nke Google na-agbanwe na oge ma na ụlọ ọrụ ndị a na-amanye ịtụgharị uche na ha SEO atụmatụ. Otu n'ime ihe ndị dị oke mkpa maka ịbawanye ogo bụ mgbasa ozi njikọ njikọ nke ọdịnaya.
Nwere ike ihu ọnọdụ ebe ndị otu SEO gị na-arụsi ọrụ ike iji zipu ozi ịntanetị gaa na ndị mbipụta. Mgbe ahụ, ndị edemede gị raara onwe ha nye ọdịnaya. Mana, mgbe izu ole na ole nke mkpọsa ahụ malitere, ị ghọtara na ọ nweghị nsonaazụ ọ bụla.
Enwere ike inwe ọtụtụ ihe na-emetụta ọdịda. O nwere ike ịbụ echiche na-adịghị mma, ihe ndị dị na mpụga na akụkọ, ma ọ bụ, na-enwetaghị azịza ziri ezi na ozi ịntanetị gị. Ọzọkwa, njikọ njikọ na saịtị ikike ikike dị elu adịghị mfe.
Yabụ, ọ bụrụ na mkpọsa gị anaghị adọta ezigbo okporo ụzọ, adala mba. Ikwesiri imezi usoro gị, tinyekwuo mgbalị ma kpokọta nsonaazụ ndị a na-atụ anya. Ugbu a, ọ bụrụ na ị ka na-alụ ọgụ maka ịbịanyeghị usoro iwu njikọ njikọ gị, mgbe ahụ edemede a bụ maka gị.
1. Mepụta ihe onye mbipụta akwụkwọ na-achọ
Buru n’uche na a ga-ejikwa ọtụtụ ọdịnaya ndị ọzọ tinye ihe ndezi ahụ. Yabụ, ha ga-eleba anya na ederede ndị na-ege ha ntị ga-amasị. Yabụ, gbaa mbọ hụ na ị haziri ọdịnaya gị dabere na ozi ị na-eje nke ọma ka onye mbipụta ahụ ghara igbu oge iji kwurịta okwu.
Tinye onwe gị na akpụkpọ ụkwụ ndị na-ege ntị ma chee echiche banyere ihe ị ga-achọ ịgụ. Tinye ebe data dị mkpa, ntinye, onyonyo, wdg. Iji mee ka ọ maa mma ma dịkwa mfe ọgụgụ. Emebela ihe na adabaghị na mmasị onye mbipụta akwụkwọ.
2. Mee ka akụkọ gị na-atọ gị ụtọ
Otu n'ime aghụghọ dị irè iji mee mkpọsa gị ọrụ bụ ịkọwapụta akụkọ gị na onye mbipụta akwụkwọ na mbido izipu ozi a. Nke a ga - enyere onye nkwusa aka inweta echiche banyere ọdịnaya gị ma mee ka ha nwee obi ụtọ banyere mkpọsa gị.
Ọzọkwa, ekwela ka ọ dị mfe dị ka ndị nkwusa na-ekpuchi ọtụtụ ụdị akụkọ ọdịnaya nwere ike ịdị n'ụdị infographic, ma ọ bụ ọbụlagodi, akwụkwọ ozi ndị ọbịa. Naanị, rịọ ma ọ bụrụ na isiokwu ahụ dị mkpa maka ndị na-ege ha ntị ma ha ga-achọ ibipụta ya. Adịla ere akụkọ isii dị iche iche n’otu mgbe, n’ihi na o nwere ike ịgbagha onye mbipụta akwụkwọ a. Mgbe inwetara nzaghachi dị mma na-arapara n'ihe isi okwu gị chọrọ.
3. Egbula oge ịgbaso ozi ịntanetị gị
Ọtụtụ oge, ị naghị enweta nzaghachi na nkwukọrịta gị gara aga mana adala mba. Dị ka e kwuru n’elu, ndị nkwusa na-ejikarị ọrụ n’aka ka ha wee ghara inwe ike ịkparịta ụka ụfọdụ. Yabụ, ịnwere ike ịgbaso ozi ịntanetị gị ma ọ bụrụ na ịnweghị nzaghachi ma ọ bụ mkpuchi.
Agbanyeghị, nke a na - enyere gị aka iweta ihe ncheta dị nro banyere ọdịdị gị nke ga - enyere gị aka ịmatakwu ụzọ ị ga - esi soro onye nkwusa. Ọzọkwa, ọ bụrụ na onye nkwusa enwekwaghị mmasị na ọdịnaya gị mbụ, nyocha nwere ike gbaa ha ume ileba anya na ya ma kwado echiche gị, ọ bụrụ na ọ dị mkpa dị ka isiokwu ndị na-ewu ewu ugbu a.
4. Chọpụta saịtị dị mkpa maka njikọ
You mere nchọnchọ zuru ezu banyere ndị na-atụ anya ndị ebipụta akwụkwọ tupu ịmalite mkpọsa izizi gị? Ọ bụrụ mba, ị na-emehie nnukwu. Ọ bụ ihe amamihe dị na ya ịghọta niche nke onye mbipụta akwụkwọ ma ọ metụtara azụmaahịa gị.
Nwere ike ịmalite idobe akwụkwọ nke ndị mbipụta maka ọdịnihu n'ọdịnihu naanị site na ịchọọ isiokwu ha na-ekwu. N'ụzọ ahụ, ị ​​nwere ike ịnwe ndepụta nke ndị mbipụta ga-enwe mmasị na ọdịnaya gị. Ọzọkwa, ọ ga - enyere gị aka ịhazi ozi maka ndị nkwusa site na ịghọta ọrụ ha n'otu n'otu.
5. Hazie ozi ị na-ezigara gị
You na-eziga ozi ịntanetị yiri nke ahụ iji tinye ndị nkwusa ọ bụla? Ọ bụrụ ee, ị ga-ahụ enweghị mmasị n'akụkụ ndị editọ. Ọzọkwa, ọ bụrụ na ị na-esochi ọnụọgụ pịa-gị, ị nwere ike ịhụ eserese na-ada ada. Yabụ, ọ dị oke mkpa ịdepụta ọnọdụ ntụpọ gị dabere na onye natara email ahụ.
Ọzọkwa, ọ bụrụ na ịmepe mkpọsa na ọkwa mgbasa ozi kachasị elu ma ịnataghị nzaghachi ọ bụla, tụlee ndepụta gị nke akwụkwọ ọkwa nke abụọ. Dika ndi nkwusa juputara na ebumnobi di iche na usoro ihe di n'ime ha, ikwenye na nani otu nwere ike tufue ohere. Echefula imezi ozi ezitere.
6. Bịaruo nso dị iche iche nyiwe
Nke a dị mfe ma dị irè njikọ ụlọ tactic. Ọ bụrụ na usoro gị na-emebu gụnyere nkwukọrịta email, oge a ị ga-enweta usoro ikpo okwu ọhụrụ. Ikekwe, igbe ozi ndị nkwusa juputara na ozi ịntanetị, yabụ, ha na-atụ uche ụfọdụ n'ime ha.
I nwekwara ike izipu njikọ nke mkpọsa gị site na Twitter ma ọ bụ LinkedIn, ma ọ bụ bulie ekwentị. Ọ bụ ụzọ iji kpochapụ ozi ịntanetị jupụtara na njide nke onye mbipụta maka mkpọsa gị.
7. Bụrụ na akụkọ kacha elu
Mgbe ụfọdụ, mkpọsa anaghị arụ ọrụ n'ihi oge na-adịghị mma. Ọ dịghị onye ga-enwe mmasị n'ihe ọ bụla mere. Yabụ, ọ dị mkpa ịleba anya n'ihe ga-eme na ihe na-eme gburugburu gị.
Iji maa atụ, ị bidoro njem njem n’oge uduoyi. Ọ ga-arụ ọrụ dị ka ọ nwere ike ịbụ na oge ọkọchị?
Cheta, mgbe niile họrọ a isiokwu dịkarịa ala 15 ụbọchị tupu ọbịbịa omume ma ọ bụ na-adịbeghị anya na-ekpo ọkụ isiokwu ma ọ bụ ozi ọma. Ọzọkwa, ị nwere ike ịhọrọ isiokwu zuru ezu iji nwee mmasị na ndị na-ege gị ntị. I nwekwara ike ịkọwapụta ihe kpatara ya n'ọgba gị maka ihe kpatara ị na-eziga mkpọsa ugbu a.
8. Gee ntị na isiokwu
Nwere ike ịnọ na-eche ma emepere email gị? Maka nke a, ịnwere ike iji sọftụwia nsuso mee ka ị gbasawanye ozi ọma gị. Yabụ, ọ bụrụ n'ịhụ ọnụego emeghe emeghe, ịnwere ike ịnwale usoro dị iche iche.
Gbalịa izipu ozi ịntanetị site na iji ahịrị isiokwu na-adọrọ adọrọ iji jide uche onye editọ. I nwekwara ike nnwale na ahịrị isiokwu ọhụụ maka ozi-e dị iche iche. Nke a bụ maka ịmepụta ihe na-amasị ndị mbipụta akwụkwọ ma mee ka ha pịa email gị ịmatakwu. Kama ịkọwapụta isiokwu gị nke ọma, ịnwere ike iji ọrụ dịka nchọpụta na-ekpughere naanị ma ọ bụ data ọhụrụ.
9. Nye ihe nanị
Ọ bụrụ n ’ọ bụ naanị onye nkwusa ka ị na-enye onyinye, ha ga-azụrịrị ya. Nke a nwekwara ike ịzọpụta gị emezughị eme mkpọsa. Dịka e kwuru na mbụ, mepụta usoro ịhazi onwe gị ma debe nkwukọrịta dabara na mkpa.
Ọzọkwa, ọ bụrụ na mkpọsa gị anaghị arụ ọrụ nke ọma, tụlee iso ndị nkwusa gị na ha rụburu ọrụ rụọ ọrụ ma nye ha ọdịnaya pụrụ iche maka oge. Ozugbo inwetara mgbatị siri ike nke nnukwu mkpọsa, ịnwere ike ịmalite usoro njikọ ụlọ njikọ na ịbịaru akwụkwọ mbipụta kacha elu.
Ihe ndị ahụ e kwuru n’elu ga-enyere gị aka imeziwanye nke gị ndokwa njikọ ụlọ ọrụ ọdịnaya, ma ọ nwere ike iwe oge iji mee ka nsonaazụ dị mma na ogo gị. Oge a dabere na ọrụ gị, asọmpi na ụlọ ọrụ gị, isiokwu ndị dị mkpa, akụkọ ihe mere eme na ike nke ngalaba gị.
Ọzọkwa, ị kwesịrị ịdebe ọganihu gị, bido na ebe ị nọ ugbu a. Si otú, ị nwere ike ịmepụta a ezi uche na-atụ anya nke gị website ogo plus a ụzọ map nke-esi nweta ya. Inwere ike ibido mmemme dika atụmatụ gị iji melite websaịtị gị, arụmọrụ ịntanetị na azụmaahịa gị.
Tags: usoro azumahia backlinkbacklinking usoro mgbasa ozinjikọ mkpọsaije ozigboatụmatụ aghụghọ